Umshini Wokuphakela Kwezilwane
Umshini wokuphakela wezilwane ongu-15-20T / D
Umshini Wokuphakela Izilwane ongu-50T / D
6-10T / D Umshini Wokuphakela Izilwane
100T Isitoreji Silo
I-200T Silo Yokugcina
500T Isitoreji Silo
I-1000T Silo Yokugcina
2000T Isitoreji Sokugcina
I-5000T Silo Yokugcina
7T / D Ummbila Mill Machine
12T / D Ummbila Mill Machine
20T / D Ummbila Mill Machine
30T / D Ummbila Mill Machine
50T / D Ummbila Mill Machine
70T / D Ummbila Mill Machine
100T / D Ummbila Mill Machine
Umshini Wokupakisha we-Semi-Auto
25-50kg Machine Semi-Auto Ukupakisha
Iphepha Izikhwama Ukwenza Machine
5T / D Ukolweni Ufulawa Mill
10T / D Ukolweni Ufulawa Mill
15T / D Ukolweni Ufulawa Mill
20T / D Ukolweni Ufulawa Mill
30T / D Ukolweni Ufulawa Mill
40T / D Ukolweni Ufulawa Mill
50T / D Ukolweni Ufulawa Mill
100T / D Ukolweni Ufulawa Mill
Umshini Wokugaya Ummbila weTehold
IMaize Milling Machine, okuwumsebenzi othuthukisa abantu, ufulawa wommbila ukhulisa abantu ulethe nezinzuzo. Ummbila ufulawa Machine ukuthuthukiswa ngokushesha emazweni ezolimo athuthukile, thina akhiqize ummbila Milling umshini cishe iminyaka eyi-10 kusukela ngo-2008 Umphakathi manje hi ...
Ungalwenza Kanjani Uhlelo Oluhle Lokugaya Ufulawa Kukhiqizwa Kofulawa
Imishini yokugaya ufulawa ethuthuke kahle ilethe ushintsho ezitshalweni zokugaya ufulawa, emakethe kafulawa eChina. Isitshalo esikhulu sokugaya ufulawa sibonakala sithathe ingxenye enkulu, futhi hhayi nje ngenxa yokukhiqiza okuphezulu, banenkinga enkulu kakhulu ...
Umshini wokugaya wesimanjemanje, ikakhulukazi, futhi usebenza kahle kakhulu, wenzelwe ukukhipha ufulawa omhlophe omningi ngangokunokwenzeka okusanhlamvu ngakunye
Ukugaya kwendabuko ukuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthembeka, ikhwalithi, ukunambitheka kanye nenani lokudla okunomsoco kafulawa. Lokhu kungenxa yokuthi okusanhlamvu okuphelele kugaywa ngokudlula phakathi naphakathi kwamatshe okugaya amabili avundlile, ayindilinga, kugcina futhi kuhlanganiswe uwoyela wegciwane likakolweni. Le nqubo elula ise-hea ...
sihlala sibambe intshisekelo nokuzimisela ukukusiza uqale ibhizinisi lakho lokugaya ufulawa ngokuba nomshini wokugaya ummbila noma isigayo sefulawa kakolweni
Njengenye yezinhlangano ezikhula ngokushesha kwezomnotho, i-Afrika idlala indima ebaluleke kakhulu emhlabeni. Njengamanye amazwe, ezolimo zibaluleke kakhulu esizweni, akukho okuhlukile e-Afrika, futhi, ezolimo zibaluleke kakhulu emazweni amaningi ase-Afrika. Kepha ...
Izigayo zoMmbila nezikafulawa kakolweni ngaphandle kokungabaza kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuziphilisa okuhle futhi zibe neqhaza eKenya
Ngenkathi umkhiqizo wezolimo ulinganiselwe, inani labantu baseKenya liyakhula. Lokhu kuletha izinselelo ezibucayi ekunikezelweni kokudla ezweni, abantu abaningi bathola usizo lokudla minyaka yonke. Ukufaka isandla embonini yokudla akuyona nje indlela yokushintsha impilo yakho kepha isenzo sokuziphatha ukuze ...
Ukusebenza Isimiso Of Ufulawa Milling Machine
Flour Milling machine rotary screen uses for grading grain, umshini wakhiqiza kanyekanye amathrekhi amathathu, feed feed is elliptic, middle part is circular and then through small small oval to discharge end, the takriban linear reciprocating motion. Ine-uniq ...
Ukucubungula okusanhlamvu kuyinqubo yokususa ukungcola, ukulungisa umswakama, ukuxhuma, ukuxebula nokugaya izinto zokusetshenziswa zibe yimikhiqizo yokusanhlamvu noma yempuphu ngokuya ngezindinganiso ezahlukahlukene zekhwalithi. Okusanhlamvu okucwengileko, okufana nofulawa welayisi, ufulawa kakolweni, ufulawa wommbila kanye ...
21F, Isakhiwo A, XinKe International Plaza, Yuhua District, ShiJiaZhuang, China.